मानसिक रोगीका सहारा बन्दै डा. प्रभात
Share : 1,448
० रोहित गिरी
मानसिक तथा नसारोग विशेषज्ञ डा. प्रभात सापकोटा धेरैका लागि ‘भगवान’ सावित भएका छन । कसैसँग नबोल्ने, आफैप्रति विश्वास नभएका, अब बाँच्नैद होला भनेर जीवनदेखि निराश भएकाहरु पनि आज डा प्रभातको सम्पर्कमा आएदेखि हासीखुशी जीवन बाँचिरहेका छन ।
त्यसैले डा प्रभातकोमा उपचार गराउन पुग्नेहरु उनलाई भगवान ठान्छन । वर्षौँदेखि मानसिक रोगबाट निकै समस्या झेलेका बिरामीहरु एपचारका लागि बिभिन्न ठाउँमा धाएर थकित भएको अवस्थामा डा सापकोटाकोमा पुगेपछि भने नयाँ जीवन पाएको अनुभूति गरिरहेका छन ।
अत्तरीयाका मानसिक रोगी राकेश (नाम परिवर्तित)ले आफ्नो उपचारका लागि कहाँ धाएनन ? सुरुमा उनीलाई नै आफू मानसिक रोगी हुँ भन्ने कसरी थाहा होस ! ‘मुटुको देर्बेतिर दुखाई भयो । असैह्य भएपछि धनगढी, अत्तरिया हुँदै भारतको बरेलीसम्म पुगेँ,’ राकेशले भने, ‘साथीले निको हुन्छ भनेपछि धेरै तिर धाएँ तर कतै जाँदा पनि बीसको उन्नसाइस भएन ।’ उपचारका लागि यत्रतत्र धाउँदा पनि रोग निको त भएन उल्टै भएको पैसा मात्रै सकिएपछि झन चिन्ता थपिएको उनले बताए ।
‘म अब मर्ने नै त हुँ नि भन्ने भावना मात्रै मनमा आउँथ्यो,’ उनले भने, ‘कसैसँग बोल्ने मन पनि लाग्दैन थियो । नचाहिने कुरा मात्रै मनमा खेल्थ्यो ।’ बाँच्दिन भन्ने भन्ने लागेपछि राकेशले एक दिन ४० हजारको लुगा मात्रै किने । जति बाँच्छु, त्यति दिन मोज गर्छु भन्ने भाव मनमा आएपछि उनले त्यसो गरेको बताए । उनको यो हातल देखेर उनको परिवारका सदस्य, श्रीमती निकै चिन्तित बने ।
कतैको पनि औषधिले काम नगरेर घरमै झोक्राएर बसिरहेको बेला एक जना छिमेकी दाइले निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका डा. प्रभात सापकोटालाई भेट्ने सुझाव दिए । उनैले जबरजस्ती डा सापकोटालाई भेटन लिएर आए । डा सापकोटाले दिएको औषधिले उनको जीवनमा एकाएक परिवर्तनको संकेत देखिन थाल्यो ।
‘कतै पर उज्यालो झुल्किएझैँ लाग्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘अहिले औषधि खान थालेको ६ महिना पुग्दैछ । म अहिले पूर्ण रुपमा ठिक छु ।’ उनी निको मात्रै भएका छैनन । आफ्नो व्यापार व्यवसाय पनि पहिलाजस्तै कुसलतापूर्वक सम्हाल्न थालेका छन । उनको परिवारका सबैजना अहिले उनको अवस्था देखेर निकै दंग छन ।
‘यो त मेरो दोस्रो जुनी हो,’ उनले भने, ‘मेरा लागि डा. प्रभात भगवानको साक्षात रुप हो ।’ रोशन मात्र होइन डोटीको बुडरका अर्का मानसिक समस्याले पीडित निराजन (नाम परिवर्तन) पनि काठमाडांैमा उपचार गराइरहेका थिए । लकडाउनले गर्दा उनको उपचारले निरन्तरता पाउन सकेन । त्यसपछि उपचारका लाग डाक्टर खोज्ने क्रममा उनी पनि डा. सापकोटाको सम्पर्कमा पुगे । उनैको परामर्शमा औषधि सुरु गरे ।
उनले भने, ‘नजिकको तीर्थ हेला भने झैँ भएको रहेछ । अहिले मलाई काठमाडौंको औषधिले भन्दा निकै राम्रो भएको छ ।’ निराजनले डा सापकोटाले चलाएको औषधि खान थालेको एक महिना भयो । उनलाई यस्तो लागिरहेको छ, ‘अब म काठमाडौं जाँदैन । उताभन्दा यहाँको उपचार निकै राम्रो छ ।’ उपचार राम्रो मात्र होइन, नजिक भएकाले जाने आउने खर्च पनि जोगिएको उनले सुनाए ।
उनलाई ठिक भएको देखेर एकजना छिमेकी भाइ अहिले डा. प्रभातकोमै उपचारका लागि पुगेको बताए । उनलाई पनि राम्रो भएको उनले सुनाए । डा सापकोटा राकेश र निराजनाका लागि मात्र होइन कैलालीको लम्कीका रामकृष्ण (नाम परिवर्तन)का लागि पनि बरदान बनेका छन । रामकृष्णलाई बिना कारण नै रिस उठने, मरौँ मरौँ लाग्ने गथ्र्यो । उनले भने, ‘धेरै ठाउँमा औषधि पनि गरे । तर मेरो समस्याको समाधान भएन । अहिले डा. प्रभातले मेरो उपचार गरिरहनु भएको छ, म धेरै आनन्दको जीवन बाँचिरहेको छु ।’
असार दुई गते मात्रै डा प्रभातलाई भेटेका रामकृष्णलाई लागेको थिएन आफू यति चाँडै निको हुँला भन्ने तर १५ दिन नहुँदै आफूलाई निकै सन्तोष मिलेको उनले सुनाए । डा. प्रभात सापकोटा वरिष्ठ मानसिक तथा नसारोग विशेषज्ञका रुपमा केही समयदेखि धनगढीस्थित निसर्ग हस्पिटलमा कार्यरत छन । उनी यस विषयमा धेरै बोल्न चाहेनन । यति मात्रै भने, ‘भगवान होइन, डाक्टर हो, मैले जानेको ज्ञान र सीप इमान्दारितापूर्वक मेरा विरामीमा प्रयोग गर्ने हो ।’